Saturday March 02, 2019 - 12:52:41 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cabdi Rashiid Maxamed Axmed oo ah Wasiirka shidaalka ee DF ayaa sheegay in dhowaan ay doonayaan in markale indhaha dowladaha shisheeye u bidhaamiyaan xog laga uruuriyay qeybo ka mid ah dhulka Soomaaliya islamarkaana la xiriirta sahminta shidaalka.
Wasiirka ayaa sheegay in ay ku tala galeen in sadax goor lasoo bandhigo xaraashka isagoo tilmaamay in kii koowaad uu ka dhacay London, kan soo socdana uu ka dhici doono dalal shisheeye sida Mareykanka iyo meelo kale.
Dabcan wuxuu muujinayay in shirkii London ay iyagu qabteen halka shirkadaha soo qabanqaabiyay ay sheegteen in iyagu ay qabteen.
Isagoo hadalkiisa sii wata wuxuu sheegay in ay sahmin ku sameyn doonaan xeebaha dalka qaarkood,
Dunida waxaa ka socda is badallo xawaare sare ku socda waxaa la filayaa in ay awoodooda wiiqanto dowlado ku amar taagleyn jiray caalamka, awoodo kalana ay soo baxaan sidaa darteed waxay aqoonyahanadu sheegayaan in Mareykanka iyo reer Yurub ay dadaal ku bixinayaan sidii kheyraadka Soomaaliya loola bixi lahaa isagoo cayriin ah.
Horay waxaa qeybo kamid ah badda Soomaaliya dowlado kale ugu saxiixay xubno madax ka ahaa dowladda Federaalka, haddana waxaa dowladda Muqdisho ka jirta hoggaamiya muwaadiniin Mareykan iyo Yurubta ka socda waxayna kaalin ku leeyihiin xaraashka kheyraadka dalka Soomaaliya sababtoo ah iyagu ma aaminsana ku noolaanshaha wadanka oo waxa ay kusoo barbaareen dalalkaas.